I$240 Million Eyathnjiswa Nguhulumende Izangezelela Indleko Zokuhambisa Lokuhlala Hatshi Iholo: Apex Council
Zibandlela 31, 2012
Izisebenzi zikahulumende zithi sezivumelene lomqatshi wazo ukuthi izigidi ezedlula amakhulu amabili zamadola- $240 million, ethenjiswe ukubengezelela iholo, isizakwengezelela indleko zokuhambisa lokuhlala kuphela hatshi iholo ngokwalo.
Izisebenzi zikahulumende zithi sezivumelene lomqatshi wazo ukuthi izigidi ezedlula amakhulu amabili zamadola- $240 million, ethenjiswe ukuzengezelela iholo, isizakwengezelela indleko zokuhambisa lokuhlala kuphela hatshi iholo ngokwalo.
Ngokunjalo, izisebenzi lezi zithi lokhu zikhulumisana lomqhatshi wazo ngokuthi zengezelelwe iholo kungalungiswa uluhlu lukahulumende olokusetshenziswa kwemali elizweni olwe budget ngenyanga ka Ntulikazi.
Lokhu bekuyimpumela yomhlangano oqhutshwe yinhlanganiso emela izisebenzi, eye APEX Council leye National Joint Negotiating Committee lamuhla eHarare.
UMnu. Sifiso Ndlovu, isiphathamandla se APE Council, utshele uSithandekile Mhlanga we Studio 7 ukuthi kubunjwe ikomishini ezahlolisisa ukuthi izinqumo ebunjwa kule imihlangano ziyafezwa.